Ukuphishekela Izwe Lase-Abbeyfield Farm - IntoKildare
Noma ngabe ungumthandi wamahhashi onentshisekelo yokugibela amahhashi, noma ibhizinisi elifuna isipiliyoni sokwakha iqembu elinomehluko, i-Abbeyfield Farm inakho konke okudingayo.
Beka kumahektare angaphezu kwama-240 wezindawo ezinhle zaseKildare ezisemaphandleni i-Abbeyfield Farm ungumholi wase-Irelands ekuphishekeleni izwe. Izivakashi zingazama isandla sokudubula amajuba obumba, ukudubula ngomnsalo, ukudubula kwezibhamu nokugibela amahhashi. Kungaba yisibali sikhathi sokuqala noma ufeze okuningi futhi ufuna inselelo, abafundisi abangochwepheshe bakhona ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa kahle ukuvakasha kwakho.
Ake sikukhombise indawo esemaphandleni yaseKildare indlela engcono kakhulu, uma ubuyela emuva. Kumuntu othanda ukudubula, oqalayo noma oshayayo, isizinda sethu sobubanzi bezobuciko sizohambisana nezidingo zakho kufakwe nochwepheshe.
Ungaphansi kwemizuzu engama-20 ushayela usuka eDublin's M50, ukubhukelwa kwezinkampani namaqembu wamukelekile. Ukubhuka kubalulekile.
Ukuzidela Nemisebenzi, Outdoors, I-Equestrian Kildare, Ubumnandi Bomndeni, Clane
Clane, Isifunda iKildare, Ireland.